‘विद्रोही’ प्रधानमन्त्री ओली !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
‘विद्रोही’ प्रधानमन्त्री ओली !
ओली जतिसुकै पराजित हुन्, उनको बोली सानो हुँदैन । जतिसुकै गलत किन नहुन्, तर्क गर्न छाड्दैनन् ।
कार्तिक १७, २०७७ गंगा बीसी
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आइतबार सहजै भनिदिए, ‘सँगै बस्न सकिन्न भने अलगअलग जाऔं । तपाईंले कुनै कदम चाल्नुभयो भने त्योभन्दा ठूलो कदम म चाल्छु ।’
आफ्नो पद नै धरापमा पर्ने सम्भावना भए पनि उनी कुनै विद्रोही नेताजस्तै आफ्नो पार्टी फुटाउने धम्की दिन सक्छन् । आगामी परिणाम जे होला, त्यसलाई काबुमा राख्न सक्ने गरी उनी ‘ओभर कन्फिडेन्ट’ देखिन्छन् ।
तपाईंलाई लाग्न सक्छ, के प्रधानमन्त्री विद्रोही हुन सक्छन् ? प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई के भन्नुहुन्छ ? के उनको सरकार सञ्चालनको कार्यशैली कुनै विद्रोही नेताभन्दा फरक छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्री कुनै विद्रोही नेताभन्दा कम छैनन् ।
उनको कार्यशैली हेर्दा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेका नेकपा अध्यक्ष दाहालको भन्दा बढी विद्रोही छ । पछिल्लो समय पूर्वविद्रोही नेता दाहालको कार्यशैली भने सहमति–उन्मुख हुँदै गएको छ । एमालेसँग पार्टी एकता भएपछि दाहालको स्वभावले विद्रोहीको छनक दिएको छैन । उनी बढी सम्झौता र सहमति–उन्मुख हुँदै गएका छन् । ओली भने दिनप्रतिदिन थप विद्रोही हुँदै गएका छन् । यो हेर्दा लाग्छ– दाहाल शान्तिपूर्ण राजनीति गरेका नेता हुन्, ओली विद्रोहबाट आएका नेता हुन् ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली पार्टीमा अल्पमतमा परे । अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षसँग बहुमतबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यस बेला पार्टी फुटको संघारमा पुगेको अनुमान थियो । त्यति बेला दाहालसँग भएका हरेक भेटमा ओली भन्थे, ‘तपाईंले सकेको गर्नुस्, मैले सकेको म गर्छु ।’ उनको यो कुरा सुनेर दाहाल छक्क पर्थे । किनकि विगतमा सयौं सम्झौता गरिसकेका दाहालसामु ओलीले बहुमतसमक्ष सम्झौता गर्ने कुनै संकेत थिएन । यो देखेर दाहाललाई लाग्यो होला, ‘म विद्रोही नेता कि ओली ?’
ओलीले आफू अल्पमतमा परेको बेला नेकपाबाट विद्रोह गर्ने धम्की दिए । प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने अवस्थामा उनले विद्रोह गर्थे कि सम्झौता ? त्यो कुरा उनैले जानुन् । ओलीको विद्रोही बोलीले अन्ततः दाहाल र उनीबीच सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताअनुसार सरकार ओलीले र पार्टी दाहालले चलाउने निर्णय भयो ।
पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पार्टीभित्र एउटा विद्रोह थियो । ओलीको ‘ब्याकअप’ पाएर नेता यामलाल कँडेलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका थिए । अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच अनौपचारिक सम्झौता भएपछि त्यो अविश्वास प्रस्ताव सफल भएन । त्यस बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पत्र लेखेर कर्णाली प्रदेशसभाका मुख्य सचेतक गुलावजंग शाहलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा दाहालले अर्को पत्र लेखी पार्टी प्रदेशसभाले टुंगो लगाउन निर्देशन दिए । दुई अध्यक्षको ‘पत्र–वार’को परिणाम केही समयपछि पार्टीमा देखिनेछ ।
एकपटक होइन, पटकपटक ओलीले दाहालमाथि विद्रोह गरिसकेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ओलीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाविरुद्ध विद्रोह गरेका दाहाल यति बेला भने ओलीको विद्रोही मनोविज्ञानले छक्क परेका छन् । विकल्प भइदिएको भए दाहालले पनि विद्रोह गर्न सक्थे । विद्रोहको अनुभव ओलीभन्दा दाहालसँग धेरै छ । तर यति बेला ओली नै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीका रूपमा विद्रोही देखिएका छन् । उनको सरकारका काम–कारबाही मात्र होइन, कोरोना, सञ्चारमाध्यम, प्रतिपक्ष कांग्रेसप्रति विद्रोह छेड्छन् । प्रायः प्रधानमन्त्रीले आक्रामकभन्दा कूटनीतिक र रक्षात्मक भएर सरकार चलाएको देखिन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली भने विद्रोही बोली र आक्रामक अभिव्यक्ति दिएर सरकार चलाइरहेका छन् ।
ओली आफ्नो कुरामा तर्क गर्न सिपालु छन् । तर्कमा उखान जोडेर प्रस्तुत हुने उनको पुरानै बानी हो ।
कोरोना महामारी नेपालमा प्रवेश गरेपछि ओलीले बेसारपानी खाएर कोरोना भगाउन सकिने तर्क गरे । उनको यो भनाइलाई सामाजिक सञ्जालमा व्यापक उडाइयो । जो संक्रमित भए, प्रायः सबैले बेसारपानी सेवन गरे । अझै पनि कोरोनासम्बन्धी प्रसंगमा उनले बेसारपानीको वकालत गर्न छाडेका छैनन् ।
भारतसँग सम्बन्ध चिसिएका बेला जुलाई दोस्रो साता राम वीरगन्जभन्दा अलि परको गाउँमा जन्मेको भन्ने तर्क गरे । जुन तर्कले भारतमा तरंग नै ल्यायो । आफ्नो तर्क जे होस्, त्यसबाट पछि हट्ने उनको स्वभाव छैन । उनले पर्साको ठोरीमा रहेको रामसम्बन्धी ऐतिहासिक भूमिको अध्ययन गर्न टोली बनाउन निर्देशन दिए । त्यो टोलीले अहिले के गरिरहेको छ, जानकारी नभए पनि ओलीको निर्देशनमा सम्बन्धित निकायले काम थालेको थियो । पुरातत्त्व विभागको टोली एकपटक ठोरी पुगेको थियो ।
पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले घरघरमा ग्यासको पाइप जोडिदिने, नेपालको झन्डा भएको पानीजहाज चलाउने वचन निरन्तर दोहोर्‍याइरहे । आफ्नो तर्कमाथि अरूले के टिप्पणी गर्छन् भन्नेमा उनी खासै वास्ता गर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा जायज सुझावलाई समेत उनले ठाडै इन्कार गरेका दर्जनौं उदाहरण छन् ।
ओली कसरी विद्रोही भए ? उनी २०२८ सालमा भएको झापा विद्रोहका एक नेता हुन् । पञ्चायतविरोधी विद्रोहका कारण उनी करिब १४ वर्ष जेल बसे । जेलमा बस्दा होस्, सडक वा सरकारमा हुँदा उनको विद्रोही स्वभाव कहिल्यै हराएन ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कडा शब्दमा विरोध गर्ने ओली नै थिए । माओवादी बमको प्रतिकार ओलीले बोलीबाट गर्थे । जसकारण माओवादीहरू उनलाई ‘दुस्मन’ भन्ने गर्थे । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनले माओवादीले संविधान निर्माणका लागि ल्याएको प्रस्तावको आलोचना गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्यस बेला माओवादीले संविधानसभा भाँडेको आरोप ओलीलाई लगाउँथे । उनी आफूलाई लागेको कुरा सिधै भन्थे, कोही खुसी होस् या दुःखी । संविधान निर्माणका क्रममा उनले माओवादीलाई ‘दूधको साछी बिरालो, बाँदरलाई मकैका कुन्यू, काठमाडौंमा रिसाएको बिरालो रोल्पामा गए खाँबो चिथोर्छ’ भन्दै अनेक व्यंग्य गरे ।
अन्ततः दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा उनले खास गरी माओवादीका केही प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरी अग्रसरता लिएका थिए । त्यसपछि उनको राजनीतिले शिखर चुमेको चुम्यै छ ।
प्रायः विद्रोह जनताले गर्छन् । ओलीको सन्दर्भमा त्यो कुरा मिल्दैन । कहिलकाहीँ ओलीले जनताविरुद्ध विद्रोह गर्छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले दिएको अभिव्यक्ति रोचक छ । उनले झापाबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए, ‘जनताले गल्ती गरेकाले म पराजित भएँ । जनताले यो कुरा महसुस गर्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा सच्याउनेछन् ।’ यो उनको जनताप्रति ‘साइलेन्ट’ विद्रोहको अभिव्यक्ति थियो ।
जति पराजित भए पनि कहिल्यै नझुक्ने स्वभाव ओलीमा देखिन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेमा करिब १४ वर्ष माधवकुमार नेपालले महासचिव भएर पार्टी चलाए । त्यस बेला ओली अल्पमतमा थिए तर स्वर सानो थिएन । कतिपय सन्दर्भमा उनलाई जिल्लाबाहिर गएर भाषण गर्न बन्देज थियो । पार्टी अनुशासनको डन्डा उनीमाथि लागिरहन्थ्यो तर उनले कहिल्यै बोल्न छाडेनन् । आफ्नै पार्टीविरुद्ध उनी निरन्तर विद्रोह बोलिरहन्थे ।
बुटवल महाधिवेशनमा नेता झलनाथ खनालसँग अध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि उनी खरो विद्रोही देखिए । त्यति बेला अध्यक्ष खनालले आफूले चाहेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन धौधौ हुन्थ्यो । माओवादीसँग सहकार्यमा प्रधानमन्त्री हुँदा खास गरी ओलीकै अडानका कारण बहिर्गमन हुनुपर्‍यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिको मुख्य जरो नै विद्रोह–भूमि हो । पञ्चायतविरुद्ध विद्रोह गरेका उनले झापा विद्रोह र त्यसपछि नानीदेखिको बानी छाड्न सकेनन् । उनी जतिसुकै पराजित हुन्, बोली सानो हुँदैन । जतिसुकै गलत किन नहुन्, तर्क गर्न छाड्दैनन् । उनका कुरा सुन्दा लाग्छ, उनको शब्दकोषमा तर्क मात्र छ ।
उनले एउटा राजनीतिक लाइन लिएपछि त्यसबाट यू–टर्न हुन धेरै समय लागेको देखिन्छ । लामो समय माओवादीको चर्को विरोधी रहेका उनी संविधान जारी भएपछि माओवादीसँग सहकार्य गर्न पुगे । एमाले र माओवादीको एकतापछि उनको रणनीति स्पष्ट छ । खास गरी अध्यक्ष दाहालसँग सहकार्य गरे पनि उनले सहजै स्वीकार गरेको देखिँदैन । उनले सरकार एकलौटी चलाएका छन् भने कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको कार्यक्षेत्रमा पनि निरन्तर हस्तक्षेप जारी राखेका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वास ल्याएपछि पत्र लेखेर हस्तक्षेप गरे । यी सबै क्रियाकलापले उनी ‘विद्रोही’ प्रधानमन्त्रीको शैलीमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ १४:४०
कार्तिक १७, २०७७ रूपा गहतराज
नेपालगन्ज — बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक महिलाको ज्यान गएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२ घरबारी टोलकी ६७ वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ ।
उनी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२ की वडा सदस्य हुन् । कात्तिक ३ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि भेरी अस्पतालको कोरोना विशेष वार्डमा भर्ना गरिएकी उनको सोमबार बिहान मुत्यु भएको हो ।
उपचारको क्रममा उनको रोगको प्रकृति अनुसार एन्टिबायोटिक, अक्सिजन लगायत सबै प्रकारको आवश्यक सपोर्टिभ उपचार गरिएको र उपचारकै क्रममा सोमबार बिहान साढे १० बजे उनको मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड (१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए ।
बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ भने बाहिरी जिल्लाबाट कोरोनाको उपचार गराउन बाँके आएर मृत्यु हुनेको संख्या २१ पुगेको छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७७ १४:१२